Fividianana trano any Dubai araka ny lalàna momba ny trano | Orinasa Mpampanoa lalàna
Fividianana fananana any Dubai Araka ny lalàna amin'ny trano fonenana
Afaka mividy ny Expats
Ny fividianana fananana tany Dubai dia tsy tonga dia mivantana sy mivelatra toy ny ankehitriny. Tsara kokoa anefa ny zavatra ankehitriny. Misy dingana efatra ara-dalàna momba ny fividianana trano iray any Dubai, ary hojerentsika ny momba azy rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity.
dia afaka mahazo ny an-trano manaraka / trano fivarotana trano-vonona.
fividianana lafo sy haingana
Ny mpividy dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny RERA.
Aza adino fa amin'ny maha vahiny anao, dia omena alalana hividy trano ihany ianao ao amin'ny faritra antsoina hoe Dubai. Ireo vondrom-piarahamonina ireo dia nalain'ny Printsinahitr'i Dubai mba hamela ireo olona tsy UAE sy tsy GCC handray ny fananana trano ao anaty emirate.
Izao dia nesorinay fa tsy azo antoka fa hojerentsika ny fomba ahafahanao mahazo ny an-trano / trano fametrahana trano mora-vonona. Fa raha ny marina, rehefa mividy trano any Dubai, ireto làlana manaraka ireto araka ny lalàna momba ny trano sy tany no tokony harahina.
1. Fananganana fifanarahana mpividy sy mpivarotra
Vantany vao nahavita ny fikarohana nataonao ianao, nahita ny fananana mety, nanao fikarohana be dia be momba ny mpamorona, ny faritra Dubai, izay misy ny ROI, sy ny maro hafa, dia afaka manohy ny dingana voalohany, dia ny fifampidinihana ireo fepetra momba ny varotra an-tserasera. miaraka amin'ilay mpivarotra. Azonao atao io dingana io raha tsy misy ny fanampian'ny mpandraharaha iray na mpanolo-tsaina ara-dalàna. Ny ambiny dia tokony ho tanterahan'ny masoivoho ivon-trano malaza any Dubai na orinasa miorina amin'ny lalàna izay manao izany amin'ny lalàna momba ny trano sy tany.
2. Fanasoniavana ny fifanarahana ara-barotra ho Lalàn'ny trano tena
Aorian'io dia ny manaraka dia ny sonia ny fifanarahana varotra antsoina koa hoe Memorandum of understanding (MOU). Ity antontan-taratasy any Dubai ity dia mitondra ny lohateny hoe Fatran'asa F ary azo alaina ao amin'ny tranokalan'ny departemantan'i Dubai Land. Ny fenitra ao Dubai dia tahiry 10% amin'ny trano tokony haloan'ny mpivarotra miaraka miaraka. Raha vita ity dingana ity dia antsasaky ny dingana ianao.
3. Mangataka taratasy fanamarinana tsy misy (NOC)
Manaraka, hihaona amin'ny mpivarotra ianao ao amin'ny biraon'ny mpampivelona. Ny antony anaovana io fihaonana io dia ny fangatahana sy ny fandoavany ny taratasy fanamarinana tsy mitandrina (NOC) amin'ny famindrana ny tompony. Ny NOC dia havoakan'ny mpamorona, saingy rehefa avy nanamarina fa tsy misy sarany mihidy amin'ny fananany amin'ny alàlan'ny saram-panompoana.
4. Fanatsarana ny famindrana ny fananana tompona tany amin'ny departemantan'i Dubai
Raha vao mahazo ny NOC, dia hihaona amin'ny mpivarotra ao amin'ny biraon'ny sampan-draharahan'ny Dubai Land ianao raha vao vita ny famindrana. Hanontany anao ny DLD hanao fandoavam-pananana amin'ny endrika taratasin'ny mpitantana. Io taratasim-bola io dia tsy maintsy aloa amin'ny mpivarotra amin'ny daty famindrana. Ary farany, havoaka ny anaram-boninahitra amin'ny marika vaovao, ary ho lasa tompon'ny trano iray any Dubai ianao.
Ny fomba samihafa amin'ny fividianana trano tany Dubai
Raha tsy afaka mandoa vola am-bola ianao dia tsy maintsy mila mpampindram-bola.
Ny fividianana fananana toy ny expat dia mety ho sarotra be, misy ireo sakana hafa izay mety manapaka ny mpilalao kely. Saingy ny departemantan'i Land Land of Dubai miaraka amin'ireo vondron'ny mpanao lalàna mifehy azy ireo no mahatonga ny fizotran'ny fividianana fananana haingana sy haingana.
Tokony hividy fananana tsy misy tetika ve aho?
Na dia ampitahaina amin'ny fomba hafa aza dia mila fotoana izany. Izy io no tena fomba tsotra indrindra hividianana fananana any Dubai.
Ny mpividy dia tsy maintsy mametraka takelaka fangatahana amin'ny mpamorona.
Ho fankatoavana ny fangatahana dia hiverina any amin'ny ivon'ny varotra mpamorona ny mpividy amin'ny andro iray efa nomanina mialoha hisafidy ny unit sy handoa ilay vola voalohany.
Arakaraka ny haavony dia mety miandry 2 ka hatramin'ny 3 taona ny mpividy alohan'ny handraisana ilay fananana. Ny mpamatsy dia hanome ny datin'ny fahavitan'ny.
Fa maninona no hividy trano amin'ny tsena faharoa?
Ity fomba ity no fomba haingana indrindra hividianana fananana any Dubai, saingy somary sarotsarotra ihany ity dingana ity, izay misy fandaniam-bola somary marina.
Mpamatsy vola te hividy trano izay misy findramam-bola dia ilaina ny afaka mamoaka ny trosan'ny mpivarotra alohan'ny famoahana ny titreur ny tompon'andraikitra.
Tsy maintsy misoratra anarana amin'ny RERA ny mpividy.
Raha vao jerena ilay fananana dia omen'ny mpividy ny tolotra amin'ny mpivarotra, ary rehefa ekena io tolotra io dia mamokatra ny fahatsiarovana ny fifanarahana (fifanarahana) ny mpandraharaha, izay milaza ny vidin'ny antoko sy ny andraikiny.
Ny mpividy dia avy eo handoa vola 10 isan-jaton'ny anaran'ilay mpivarotra mba hahazoana antoka ilay trano.
Miankina amin'ny hoe mandoa vola ny mpividy na amin'ny findramam-bola, ny dingana manaraka dia maharesy ny bankin'ny mpividy izay manao ny fizahana tombana ny fizahana ny fananana sy hiantohana azy io ho ampy antoka.
Raha vao vita ny fanekena farany dia raisin'ireo mpividy izany. Avy eo hametraka ny mpivarotra mahazo ny mari-pankatoavana No Objection (NOC) avy amin'ny mpamorona.
Misy fanendrena avy eo atolotra eo amin'ny sampan-draharahan'ny fanajariana ny tany mba hamita ny famindrana.
Miaraka amin'ireo fizotran-taratasy voasoratra rehetra, ny mpividy dia tsy maintsy mandoa 2% sy AED315 any amin'ny departemantan'ny tany Landy Dubai, miaraka amin'ny vidin'ny fividianana ny mpivarotra sy ny vaomiera amin'ny mpandraharaha.
Ireo mpividy dia handray ny fifanarahana amin'ny lohateny, izay amin'ny anarany, miaraka amin'ny fanalahidy sy fahazoana karatra mankany amin'ilay trano vaovao.
Ahoana no fomba ahazoako antoka mialoha ny fampindramam-bola?
Raha tsy afaka mandoa vola ianao, dia tsy maintsy mangataka trosa. Mba hahazoana antoka ny fampindramam-bola indreto, ireto ny antontan-taratasy tsotra anananao mba hanomanana:
Taratasy karama avy amin'ny mpampiasa anao.
Tapaka ny karama azonao.
Ny filazan'ny banky tao anatin'ny enim-bolana lasa.
Kopia pasipaoro misy pejy sary sy visa.
Dika mitovy amin'ireo carte de crédit.
Ny dingana mialoha ny fampindramam-bola dia maharitra fito andro ho an'ny mpampindram-bola karama ary maharitra kokoa ho an'ny olona miasa asa.
Inona avy ireo karazana vidin'ny fananana iray?
List Price: Ny fangatahana ny vidin'ny trano dia ny lisitry ny lisitry izay azo resahina.
Vidiny amidy: Ny vidin'ny vidiny dia ny vidiny alain'ny tompony.
Sarobidy tombanana: Ny lanjan'ny mpandraharaha manan-tompo dia manome amin'ny alàlan'ny fampitahana ny lanjan'ny fananana amin'ny fananana hafa eny an-tsena.
Inona ny vola hafa tokony handinika?
Rehefa mivarotra izany:
Fanadiovana findramam-bola (saram-panafoanana)
Fanadiovana ny saram-panompoana / sarany fikojakojana
Fandaminana ny hatsiaka DEWA / Distrika
NOC an'ny mpampivoatra raha takiana
Ny saram-pahefana mifindra any amin'ny sampana miadidy
Fametrahana arakaraka ny fifanarahana amidy eo amin'ny mpivarotra sy ny mpivarotra
Fifandraisana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny rano
Saram-pianarana momba ny trosa raha takiana
Ny saram-pitantanana amin'ny vidim-pahefana isan-karazany amin'ny departemanta
Hihaona amin'ny mpisolovava iray alohan'ny hividiananao trano any Dubai, UAE Hamarino tsara fa manarona tanteraka anao ny fifanarahana raha misy fifandirana na fitsaràna. Antsoy izahay izao +97150 6531334
Expatriates nividy tany tany UAE
Ny vahiny (izay tsy mipetraka ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra) sy ny mpila ravinahitra dia afaka mahazo zon'ny tompona fananana mihoatra ny fananana nefa tsy misy fetra